Athlọ Bath na Isi Na-ekpughere usoro ntinye nke Halloween - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Bath na Isi Ọrụ kpughere ha Halloween Lineup
Bath na Isi Ọrụ kpughere ha Halloween Lineup
edere ya Trey Hilburn III July 27, 2020
Ọ bụ naanị izu gara aga na Target malitere ire ngwa ahia ha nke Halloween na saiti ha. Ugbu a Bath na Isi Ọrụ weputara udiri ihe ha nke ihe uto.
Bath na Isi nchịkọta gụnyere kandụl ndị a tụrụ anya, lotions na ndị na-edozi ahụ. Mana enwere obere ihe ụtọ dị ka ọkụ abalị na ihe ndị ọzọ. O siri ike ikwu ihe kachasị amasị anyị n'ihi na anyị ejirila kandụl na-asọ oyi. Ma, vampire ọbara na-achọ mma jụụ.
Dịka e kwuru na mbụ, Target zigara ihe ha Halloween n'oge na-adịbeghị anya. Ndị na-ere ugbua. Mara mma ikweta ma ọ bụrụ na ị na-atụle na October bụ ka a bit nke a ụzọ pụọ. Enwere m ike inwe ekele maka ịhụnanya maka nkwupụta ahụ. A otutu nke a kara aka ihe ikpeazụ maka ndị fọdụrụ nke afọ m. N'ezie, mgbe ekeresimesi bịara, m na - ahụzi ihe ịchọ mma ndị ahụ na Halloween isi. Ugbu a, mkpokọta Bath na Isi na-arụ ụlọ m ga-esi ezigbo ụtọ ma na-enwe oge maka afọ fọdụrụ nke afọ.
Kedu ụfọdụ ihe kachasị amasị gị na nchịkọta Bath na Body Work? N'etiti abalị Boo Citrus? Zuru okè? Obi Hatọ untingchụ nta? Mee ka anyi mata ihe ghotara gi na ngalaba a.
Bath na Isi ỌrụkandụlhalloweenỌbara Vampire
Kevin Smith si 'Killroy nọ ebe a' Trailer nwetara Nice na Gory
Akwụsịru Egwu Halloween Na Universal Orlando na Hollywood